pa & t & apos; s inopisa nyowani 5g chirongwa chinoparadza t-mobile & apos; s yakanakisa imwe nzira ... yeshanduko
Kuru Nhau & Ongororo AT & T & apos; s inopisa nyowani chirongwa che5G chinoparadza T-Mobile & apos; s yakanakisa imwe nzira ... yeshanduko
AT & T & apos; s inopisa nyowani chirongwa che5G chinoparadza T-Mobile & apos; s yakanakisa imwe nzira ... yeshanduko
Kana iwe & apos; wanga uchicherekedza iyo inogara ichichinja indasitiri isina waya yeUS kwemwedzi mishoma yapfuura, ungangove uchitoziva kuti T-Mobile yakwanisa kukanganisa musika kakawanda kubva kutanga kwegore rino chete nevamwe zvine hukasha zvakatengesa zvirongwa zvitsva uye isingakundiki zvechokwadi 'yemahara 5G foni kusimudzira' chirongwa .
Asi Magenta yakagadzirawo yakaipa yakaipa yekudhinda uye kusagutsikana kwevatengi payakasarudza kudzikisira zvakanyanya kukwikwidza-kupwanya yakakwira-mhanyisa data sarudzo yakazarurwa mwedzi mishoma yapfuura kune iyo inoparadzanisa kufamba, uye zvinowirirana kana kwete, akadaro makwikwi ave kuenda achitevera chaizvo iro zano rakapera.
Ichokwadi, AT & T. iri kubhadharisa madhora makumi mashanu nemashanu pamwedzi pachinzvimbo cheUS $ 50 yekuburitsa 100 gigs yedata pane yazvino kubhadharisa chirongwa chakanangwa zvakanyanya pamahwendefa uye nharembozha panzvimbo pemafoni ekare echinyakare, asi izvo zvinorova zvechokwadi T-Mo & apos; s yazvino $ 50 ye50GB ye5G data yekupa .
Nomuzvarirwo, Ma Bell & apos; s yepamusoro-ye-iyo-mutsara hotspot dhizaini inosanganisira yemahara nyika kupinda kwe5G, uye iwe unogona kuwana uyu mutengo mutsva pane ese ari maviri matsva uye aripo maakaundi nezvose AT & T Yakabhadharwa uye Cricket Wireless . Zvichida chinhu chakanakisa pane zvese izvi ndechekuti haufanire kusimudza munwe kana iwe & apos; watove pane yekupedzisira opareta & apos; s 100GB dhata-chete chirongwa kana yaimbove & apos; s $ 75 / 40GB sarudzo yekuwana dhisikaundi hombe uye kusimudzira kukuru zvichiteerana kutanga neyako inotevera bhiri.
Kunze kwekunge iwe & apos; unonyatso kuve nechokwadi kuti iwe unongoda chidimbu cheiyo zana magigs eiyo 'yakakwira-kumhanya' data kana kunyatsoda kushandisa isingasvike makumi mashanu nemashanu pamwedzi, zviri pachena kuti zvakaoma kuudza AT&T Prepaid & apos; s 15GB Yakakosha Dhata kana Cricket & apos ; s 20GB Simply Dhata sarudzo, ese ari maviri akatemerwa madhora makumi matatu nemashanu. Kana iwe uchifunga nezvazvo, izvo & maapos hazvisi kunyange zvinoshamisa pasi pe $ 55.
Zvichakadaro, Verizon haina kukodzera kutaurwa mukufema kumwechete seAT&T uye T-Mobile kana zvasvika kune hotspot dhata-chete zvirongwa, sezvakaratidzwa muchati iri pamusoro, iyo Magenta yaishandisa kukwidza iyo yava- yatora pamadhora makumi mashanu e100GB yekudzosera kumashure muna Zvita 2020.
hombe isu mafoni anotakura
Maitiro ekutamba Pokemon uye mamwe Game Boy zvekare pane yako Android
Samsung & apos; inokudzwa Galaxy Cherechedzo 9 uye S10e dzimba dzemagetsi dzakachipa kupfuura nakare kose (dzakagadziridzwa)
Tsamba kune vese vashandisi veGPS S8: kubhadharisa nekukurumidza kunongoshanda chete iyo skrini iri kudzima
Yakanakisa yepamusoro-magumo maBlue Bluetooth mahedhifoni mari inogona kutenga muna 2021
Apple Kuona Akateedzana 6 vs Apple Watch Series 3
Chitsotsi chazvino chakabiwa T-Nhare mbozhanhare dzinowana mbavha kubhengi maakaunzi maakaundi
Twitch mutambo wekushambadzira weiyo iOS zvipikiri neyakaganhurwa-skrini uye PiP multitasking